လေ့လာမှုအသစ်ပန်ဒါချိုမြိန်သွားဖြစ်တည်ပြီး - သတင်း Rule
တစ်ဦးအတွက် မျက်စိကန်းသောအရသာစမ်းသပ်, ရှစ်ပန်ဒါထဲကရှစ်သဘောတူ — သကြားအရသာဖြစ်ပါသည်.
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထဲကလေ့လာမှုအသစ်အတွက်, သိပ္ပံပညာရှင်များစမ်းသပ်ဖို့ပန်ဒါအရသာ receptors ထား, အ cuddly critters ပင်လွင်ပြင်ကိုရေနှင့်အချိုမြိန်ပစ္စည်းပစ္စယအကြားခြားနားချက်ကိုသတိပြုမိလိမ့်မယ်ရှိမရှိအံ့သြ.
“ခြုံငုံပြောခြင်း, ကြောင်းကယ်လိုရီ၏သတင်းရင်းမြစ်များဖြစ်ကြောင်းစက်ရုံများအတွက်ဖြစ်ကြောင်းကြား detect ဖို့သူတို့ကိုနိုင်ပါတယ်သောကွောငျ့အပင်စားသောသတ္တဝါများကိုမွှေးအရသာအဲဒီ receptor များ,” ဂယ်ရီ Beauchamp ရှင်းပြခဲ့သည်, သုတေသနထွက်သယ်ဆောင်သော Monell စင်တာမှဒါရိုက်တာ.
သို့သော်အများဆုံး herbivores မတူဘဲ, ပန်ဒါတစ်ပင်ကပ် — ဝါးပင် — သကြားအပေါ်နာမည်ဆိုးအနိမ့်သောဖြစ်ပါသည်.
ဒါကြောင့်သုတေသီများရှိမရှိသိချင် — မြားစှာသောအသားစားတိရစ္ဆာန်နှင့်တူ, ကြောင်အပါအဝင် — ပန်ဒါချို detect သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ဆုံးရှုံးခဲ့.
အသားစားကတည်းက “အပင်ကိုစားကြဘူး, ကြားကိုဆက်သွယ်ကြပါဘူး, သူတို့ကိုမွှေးအဲဒီ receptor functional ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အတှကျဖိအားမရှိတော့ရှိပါတယ်,” Beauchamp ကပြောပါတယ် AFP သို့.
အဆိုပါသီအိုရီကဝါး-munching ပန်ဒါခဲ့သည်, အဘယ်သူသည်လည်းအများကြီးတွင်းသကြားဓာတ်နှင့်ထိတွေ့ခံရဖို့မထင်ကြဘူး, လည်းချိုမြိန်မှုအရာကိုမြည်းစမ်းသူတို့၏စွမ်းရည်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီစေခြင်းငှါ,.
Deutsch: သမုဒ်ဒရာ Park မှာဧရာမပန်ဒါ, ဟောင်ကောင် (ဓာတ်ပုံအကြွေး: ဝီကီ​​ပီးဒီးယား)
သို့သော်ထိုသို့ပန်ဒါထွက်လှည့်, အခြား herbivores တူ, ဆဲတဲ့ဒဏ်ငွေ-ညှိချိုမြိန်သွားပြီ.
အရည်နှစ်ယောက်ဖလားပေးသောအခါ,, တဦးတည်းဒူတမ, တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအ sugary ဘီယာအရက်ချက်ချ slurped ရှစ်ပန်ဒါ.
အဆိုပါသုတေသီများကြားအမျိုးမျိုးစမ်းသပ်စစ်ဆေး, fructose အပါအဝင်, ဂလူးကို့စ, sucrose, lactose, maltose, နှင့် Galactose များ. အားလုံးကိစ္စများတွင်, မွှေးသောက်ပိုမိုနှစ်သက်ခဲ့သည်, fructose နှင့် sucrose နှင့်အထူးသဖြင့်သူမြား, လူသားတွေငှက်ကလေးအဖြစ်ရိပ်မိ.
အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များလည်းပန်ဒါမှချိုမြိန်အဲဒီ receptor ဆဲလ်တွေခွဲထုတ်ဖို့ဆယ်လူလာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအသုံးပြုသူတို့ကြားဖို့တုန့်ပြန်ပြသနိုင်ခဲ့ကြတယ်.
သူတို့ကပန်ဒါအလုပ်လုပ်ချိုမြိန်အဲဒီ receptor ဆဲလ်အပေါ်ကိုင်စေခြင်းငှါမှနျးသောကြောင့်,, အရသာအချက်ထက်ကျော်လွန်, သူတို့စက်ရုံအစာခြေနှင့်အတူကူညီပေးဖို့ပန်ကရိယနှင့်အူတူသောနေရာများမှာအသုံးပြုစေခြင်းငှါ.
သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောခုနှစ်တွင်, ပန်ဒါချိုမြိန်အစားအစာများကိုပျော်မွေ့ပြုပါ — ဝါရှင်တန်၏နောက်ဆုံးပေါ်ပန်ဒါပြို Bao Bao အပါအဝင်, အဘယ်သူသည် “ပုံနို့စဉ်အတွင်းတစ်ဦးပထမဦးဆုံးအစာအဖြစ်ချိုမြိန်အာလူးတက်ကြွသောစိတ်ဓါတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်,” ကပြောပါတယ် ဒန်ယဲလ်ရိဒ်, သူကဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေစက္ကူ wrote PLOS ONE.
ဒါပေမယ့်ပန်ဒါလည်းဝါးအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်သူတို့နေမကောင်းရ. တဦးတည်းအယူအဆအ reedy စက်ရုံလိုအပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်း, ဒါကြောင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဖိအားတစ်ခုတည်းကိုသာစက်ရုံအပေါ်အားကိုးဖို့သူတို့ကိုလမ်းပြခဲ့သည်.
နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေစမျးသပျခံရ, Beauchamp ကပြောပါတယ်, ကပန်ဒါအဘို့ဖြစ်၏, ဝါးအမှန်တကယ်သကြားလုံးတူအရသာ.
နောက်ဆုံးတော့, ကွဲပြားခြားနားသောတိရိစ္ဆာန်များကွဲပြားခြားနားအစားအစာများကိုတွေ့ကြုံခံစားအတိအကျသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ် — အတုဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်နဲ့တူ, အရာ, ပန်ဒါများနှင့်အခြားတိရစ္ဆာန်များအဘို့, ချိုသောအရသာမပါဘူး.
ဤဆောင်ပါး, လေ့လာမှုအသစ်ပန်ဒါချိုမြိန်သွားဖြစ်တည်ပြီး, ကအေအက်ဖ်ပီကနေစုစည်းတင်ဆက်သည်နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
23408	0 Bao Bao, တရုတ်နိုင်ငံ, ဒန်ယဲလ်ရိဒ်, အစာ, ဂယ်ရီ Beauchamp, ဧရာမပန်ဒါ, သကြား, ဝါရှင်တန်
← ဓာတ်ပုံခွဲဝေမှု features တွေတက် Twitter ကိုရိုး MH ပေါ်တွင်ခရီးသည် Remembering 370 →